Hey’adda koontaroosha warshadaha nukliyarka Sweden oo la dhaliiley - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heeyada gaashaanka shucaaca nukliyeerka oo dhaleecayn loo gudbiyay. sawir: Fredrik Sandberg / TT
Hey’adda koontaroosha warshadaha nukliyarka Sweden oo la dhaliiley
La daabacay torsdag 14 september 2017 kl 15.00
Hey’adda gaashaanka shucaaca nukliyarka (Strålsäkerhetsmyndigheten) oo shaqadeeda si aad ah loo dhaliiley.
Hey’adda gaashaanka shucaaca nukliyarka (Strålsäkerhetsmyndigheten) ayaa ku guuldareysatey in ay fuliso hubintii ay baarlamaanka dalkaan iyo dawladdu ka dalbatey in ay ku sameyso warshadaha quwadda korontada ka dhaliya nukliyarka, taas oo fulinteeda kharash lagu siiyey, sida ay sheegtey hey’adda hanti dhowrka qaranku.
Hey’addaan oo iyadu mas’uul ka ah ammaanka warshadaha korontada ka dhaliya nukliyarka ayaan sidii la rabey uga soo dhalaalin hawshii loo igmadey taas oo aan qiimeyntii amni oo loo baahnaa ku sameyn warshadahaas nukliyarka ee dalkaan ku yaal.
Hey’adda ayaa qiratey in loo baahan yahay u kuurgal ammaanka warshadahaas lagu sameeyo balse sidaas oo tahay ma aysan sameyn.
Hey’adda hanti dhowrka qaranka ayaa farta ku fiiqdey in hey’addaan gaashaanka shucaaca nukliyarka (Strålsäkerhetsmyndigheten) ay jiraan waxyaalo hawshooda ka qaldan sida tusaale ahaan iyagoo aan hawshii loo igmadey wax warbixin ah ka soo gudbin.